Sekuru vakamitisa muzukuru (14) | Kwayedza
Sekuru vakamitisa muzukuru (14)
23 Sep, 2021 - 11:09 2021-09-23T11:54:00+00:00 2021-09-23T11:54:00+00:00 0 Views
MUKOMANA anogara kuChitungwiza ane makore 16 okuberekwa akamiswa mudare reko nemhosva yekupa pamuviri muzukuru wake wemakore 14 okuzvarwa mushure mekushereketa pavaiona mafirimu.
Mutongi wedare reChitungwiza Magistrate’s Courts, VaBrighton Danana, vakapfuudza kumberi chirango chavaida kutemera mukomana uyu (postponed sentence) nechikonzero chekuti mupari wemhosva mudiki pazera. Mukomana uyu akatongwa nemhosva yekupinda pabonde nemwana pasi pechikamu chemutemo weSection 70(1) (a) of the Criminal Law Codification and Reform Act Chapter 9:23.
Muchuchisi Nomsa Kangara vakaudza dare kuti munaChikumi 2020, mukomana uyu akanogara pamba pagere mumhan’ari apo aiita zvidzidzo zvepazororo.
“Zvisinei, akaramba achiti haana zvaanoziva uye achiti achiri mhandara kusvika ndazoenda naye pane imwe pharmacy iri pedyo vachibva vamuvheneka vakaona zvekare kuti ava nepamuviri.
“Ndipo akazobvuma kutiudza kuti akashereketa nekasekuru kake kadiki,” vanodaro tete ava mudare.